Izitayile zeenwele zamadoda ezinenwele ezijijekileyo okanye ezijijekileyo | Amadoda aQinisekileyo
Iinwele ezijijekileyo okanye ezijijekileyo? Vumela ukuba woyiswe sisidubedube sama-80s
Okwexesha elithile ngoku, iinwele ze Amadoda aneenwele ezigobileyo okanye ezirhabaxa Bayekile ukulandela kuphela ulawulo lokuzivumela ukuba boyiswe kwakhona yi-anarchy yokufunda ye-80s.
Oko kuthetha ukuba ukuba iinwele zakho zibonisa ngokupheleleyo okanye ngokuyinxenye ii-curls okanye amaza, okwangoku unayo yonke into oyithandayo ukuyeka ikhule ngakumbi kwaye gcina ubume bayo bendalo endaweni yokuyisika ukuze ikwazi ukulawuleka ngakumbi, njengoko yayiqhele ukwenziwa kude kube kutshanje.
Vumela ukukhiya kwakho kukhule kubude obude okanye obude kwaye wenze isitayile esibonakalayo sendalo esigxininisa ii-curls zakho okanye amaza kunye nokubonisa ubuso bakho. Sebenzisa isomisi sokubetha kwisantya esisezantsi emva kokuhlamba iinwele zakho iya kunceda ukuyigcina ukuba ingajongi njengokuflamka.
Ukuba amanye amaza akho abonakala engachazwanga ngokwaneleyo, ungasoloko usebenzisa amanye i-curling tongs okanye i-mini straightener. Ukuze ubanike imilo, khuthazwa yimicu yeenwele zakho ezenza ukuba uvuswe, ngale ndlela, zigcine ubuninzi bendalo.
Emva koko kukho umba wevolumu. Iinwele ezinee curls okanye amaza akufuneki zisondele entloko, yiyo loo nto Ukuba nemveliso yevolumizing ezandleni zakho kuya kukunceda kakhulu, ezinje ngeAveda's Voluminizing Tonic. Gxobhoza ukusuka kwingcambu ukuya kwincam, emva koko usebenzise iminwe yakho ukubamba umnwe.
Ukuba bhetyebhetye kuxabiseke ngakumbi xa kusenziwa iinwele ezigobileyo okanye ezomileyo, kodwa ukuba iinwele zakho zihlala zithambekele, zive ukhululekile ukufaka isicelo thambisa iinwele ngaphambi kokuba uphume ukugcina izitshixo zikwimeko efanelekileyo nokuba kunjani na.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Iinwele ezijijekileyo okanye ezijijekileyo? Vumela ukuba woyiswe sisidubedube sama-80s
Ifashoni yasesitalatweni - isuti kunye neeteki
Ekwindla-ebusika 2015/2016 iingubo ezikhethekileyo: iklasikhi 'chesterfield'